Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Xavi Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny Legioma Barca fantatra indrindra amin'ny anarana; "Ilay Lehiben'ny Puppet". Ny tantaranay Xavi Hernandez momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaran'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny ankamaroan'ny zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fahaiza-manaony fa vitsy no mihevitra ny Bio Bio Hernandez Bio izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Xavi Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa: Tany am-piandohana
Xavier "Xavi" Hernández Creus dia teraka tamin'ny 25th of January, 1980 tany Terrassa, Barcelone, Catalogne. Teraka tamin'ny reniny, Maria Mercè Creus ary ray, Joaquim Hernández (mpilalao baolina teo aloha).
Hatramin'ny fahazazany, dia tena naniry mafy ny lalao izy ary nijery lalao baolina anglisy anglisy. Xavi dia nampiseho fahaiza-manao fanatanjahan-tena tamin'ny mbola kely. Ny ray aman-dreny dia nanampy an'i Xavi handray fanapahan-kevitra tsara tamin'ny fotoana manan-danja, nitarika azy hanaraka ny lalan'ny fiainana ny lalana marina.
Na dia notarihin'ny mpilalao playmaker mpiray tanindrazana aza izy tamin'ny voalohany Pep Guardiola any Barcelone.
Xavi Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa: Career Summary
Xavi dia nanatevin-daharana an'i La Masia, akademia fampiofanana an'ny FC Barcelona, ​​tamin'ny taona 11.
Ny fiakarana haingana amin'ny alàlan'ny laharam-panahin'ny academy dia nahatonga ny mpilalao baolina kisendrasendra iray tao amin'ny ekipa rezerva 1997-98, izay nahazo ny fizaràny mba hahazoana fampiroboroboana.
Rehefa 19 i Xavi, dia nanao sonia an'i Milan izy. Nomeny ny rainy "Eny" ho azy fa hoy ny reniny "Raha avelan'i Xavi hiala Barcelona aho dia hanao
ny fisaraham-panambadiana! ".
Nandiso ilay hevitra i Xavi ary nitazona ny fivoarany tany Barcelona. Ny fahatanterahan'ny fahombiazana dia nahatonga azy ho lasa mpikambana manan-danja ao amin'ny ekipa manana ny lohatenin'i Louis van Gaal.
Xavi dia nahavita ny diany voalohany tamin'ny lalao 26 nilalao ary nandresy ny ligy Espaniola. Izy koa dia nantsoina hoe mpilalao horonantsary 1999 La Liga tamin'ny taona. Xavi no mpilalao baolina kitra tao Barcelone taorian'ny ratra nahazo an'i Pep Guardiola tao amin'ny fizaran-taona 1999-2000.
Nandroso hatrany izy ary nantsoina hoe La Liga Espanôla Player of the Year tao amin'ny 2005. Indray mandeha, taorian'ny nantsoina hoe Player of the Tournament tao amin'ny Euro 2008, i Xavi dia niresaka tamin'i Bayern Munich momba ny famindrana, saingy nanolo-tena vao haingana an'i Barcelona ny mpilalao baolina kitra Pep Guardiola fa izy dia tena manan-danja tokoa ho an'ny club izay avela hivoaka.
Tamin'ny 9 June 2010, Xavi dia nanao sonia fifanarahana efa-taona vaovao niaraka tamin'ny klioba, izay mety ho azo havaozina amin'ny 30 June 2016 miorina amin'ny isan'ny lalao nilalao. Nanana fisotroan-dronono mivaingana avy any Barcelone izy.
Tamin'ny 21 May 2015, nanambara i Xavi fa hanatevin-daharana ny klioba Qatari Al Sadd amin'ny faran'ny vanim-potoanan'ny 2014-15 mandritra ny fifanarahana mandritra ny telo taona.
Araka ny filazan'ny mpandraharaha azy, ny fifanarahana dia ho tafiditra ho ambasadera ho an'ny mondialy 2022 FIFA ao amin'ny firenena, ary manomboka ihany koa ny kalitao momba ny fiofanana. Tamin'ny 10 Novambra 2017, nilaza i Xavi fa hiala amin'ny faran'ny vanim-potoanan'ny 2017-18 izy ary hanohy ny asany amin'ny traikefa.
Xavi Hernandez tantaram-pitiavam-pitiavam-bazana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts-Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Avy amin'ny fianakaviana baolina kitra dia midika fa manankarena ianao. Izany dia satria matihanina tsara ny matihanin'ny baolina kitra. Izany no raharaha Xavi. Izy dia avy amin'ny fianakaviana manana ny lazany baolina kitra. Eto izahay dia manome anao antsipiriany momba ny fianakaviany.
RAY: Joaquín Hernández García, rain'i FC Xavi dia mpilalao baolina misotro ronono avy any Meksika. Nanomboka ny asany tamin'ny lalao baolina kitra nilalao tao Terrassa ary avy eo, tamin'ny taona 18 dia mpikambana ao amin'ny ekipan'ny Diviziona Voalohany ao Sabadell.
Taorian'ny fotoana niarahany tamin'i Sabadell, dia nilalao tao amin'ny fikambanana maromaro izy, anisan'izany i FC Barcelone izay nilalao ny zanany lahy tatỳ aoriana. Rehefa misotro ronono i Joaquin, dia nanao ekipa Katalana maromaro izy, ary ny sasany tamin'izy ireo tao amin'ny Diviziona fahatelo. Izy dia hita ho mpanoro hevitra an'i Xavi zanany lahy.
rENY: Maria Mercè Creus no renin'i Xavi. Ny mpilalao baolina matihanina FC Barcelone dia nanambara ny iray "Ady" tamin'ny reniny no nanakana azy tsy handao ireo gigantes Catalan tany aloha. "Efa nanan-tsafidy aho tamin'ny lasa, saingy nanizingizina foana izy fa any Barcelona no misy ny toerako, fa aleo any an-trano tsara kokoa, fa tokony handimby an'i Barcelona aho ary matetika izy no niasa mafy mba hiantohana ny hijanonako." hoy izy Sky Sports amin'ny alàlan'ny Soccer Laduma..
"Raha izaho no 18 ..., nanana adin'ny 'ady' tao an-tranoko aho mba hampiato ahy hiala. Ny reniko dia tena nasiaka mafy foana momba ahy tao Barca.
"Indrindra nandritra ny fotoan-tsarotra ho ahy sy ny klioba, toy ny rehefa nandeha efatra na dimy taona izahay nefa tsy nahazo na inona na inona. Rehefa tsy nino ny tenako aho dia tsy nino ny baolina kitra aho ary nikasa ny hanova ny zava-drehetra, sarotra izany. Fa eo anelanelan'ny fahakiviako sy ny reniko dia manizingizina fa izahoOuld mijanona eto Barcelone ary mahomby eto, dia tonga soa aman-tsara tamin'ny farany ". Hoy ilay mpilalao baolina kanto fahiny.
mpiray tam-po: Xavi dia manana ny isan'ny mpiray tam-po aminy 5; Ariadna Hernández (rahavavy), Dianalaura Hernández (rahalahy), Oscar Hernandez (rahalahy), Alex Hernandez (rahalahy) ary Dianalaura Hernández (rahalahy).
Xavi Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa: Relationship Life
Tatitra an-tserasera tato ho ato tao Però Libero dia milaza fa ny ekipan'i Barcelona sy i Espaina Xavi Hernandez sy Carles Puyol dia tia an'io tovovavy io. Izy no modely mpanao gazety Nuria Cunillera. Samy niady izy ireo tamin'ny 2012.
Milaza ny tatitra Libero fa samy nifarana ny fifandraisany tamin'ireo ankizivavy ankiziny ireo mpilalao roa tamin'izany fotoana izany ary nanjary nifankatia tamin'ny hottie Cunillera taorian'izay. Fantatr'i Puyol angamba fa mety hikolokolo an'i Xavi i Cunillera ary nanohy ny fahalianany tamin'ilay ramatoa.
Ny toe-draharaha dia nandrahona ny handrahona rehefa nifanatrika ny mpilalao roa ary saika hitifitra an'i Cunillera. Soa ihany fa tsy niasa ny zava-drehetra. Na izany aza, ireo mpilalao roa ireo dia mbola tsy tsara indrindra hatramin'izay nanomboka ny zava-nitranga nahatsiravina.
I Xavi no nanohy nanontany an'i Nelly Cunillera tamin'ny fanambadiana. Samy nankalaza ny fanambadian'izy ireo tao 2013 izy ireo. Fety nankalazaina ny ankamaroan'ny mpilalao baolina Barca.
Ny lanonana dia nanatrehan'ny ankamaroan'ny ekipa mpiara-dia ao Barcelona ao anatin'izany Lionel Messi, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Jordi Alba, Victor Valdes, Javier Mascherano ary Pedro Rodriguez. Na izany aza, tsy nanatrika ny asa i Puyol. Fantatro ny antony.
Ny zanany vavy, Azia, dia teraka tamin'ny 3 tamin'ny Janoary 2016.
Xavi Hernandez Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Nahoana izy no niala an'i Barca?
Araka ny filazan'ny rainy, Joaquim Hernandez, "Tsy avelan'i Xavi for ara-toekarena reazanaka: "Tsy mandao vola izy. Heveriko fa tsy tia baolina kitra izy nandritra ny roa taona farany. Nisy ireo toe-javatra sarotra tao amin'ny efitra fiandrasana sy ny kapiteny, nijaly mafy izy ".
Ilay mpilalao dia niaiky nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety fa fotoana tokony hialana izany. "Tsy maintsy niandry aho mandra-pahatongan'ny zava-drehetra mba handao ny varavarana lehibe". Xavi nandatsaka ranomaso sasantsasany taorian'ny filazàny ny baikony tsara farany.
Xavi Hernandez Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Izay ho tsaroany
Satria izy no iray amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo midadasika indrindra amin'ny fotoana rehetra
Ho an'ny fahafahany mahita sy manararaotra ny toerana ho toy ny mpilalao playmaker. Araka ny nolazainy, "Izany no ataoko: mitady toerana. Tontolo andro. Mijery foana aho. " Hitady toerana izy, hiseho ho mpiara-miasa iray izy ary handefa ilay baolina, miaraka amin'ny mpikarakara azy, Pep Guardiola. "Azoko ny baolina, omeko ny baolina aho, azoko ny baolina, omeko ny baolina."
Ho an'ny fahitany azy, mametra ny fisian'ny baolina kitra madio sy ny lozam-pifaneran'izao tontolo izao izay namela azy hibaiko ny fizotran'ny lalao ary tsy mahazaka ny fananany.
Satria izy irery ihany no mpilalao baolina kitra Barca izay ahitana ny trosan'ny lehibe indrindra (25) sy ny ankamaroan'ny anaram-bositra (8). Nahazo trophies marobe (28) izy noho ny mpilalao espaniola hafa teo amin'ny tantara.
Miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra tsy mety amin'ny tantaran'ny tantaram-pitiavan'i Xavi sy ny bio ianao, azafady Mifandraisa aminay!